ဓာတ်ပုံများကို Android တွင်လုံခြုံစွာပေးပို့ရန်စာဝှက်နည်း Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည် Android ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်နှင့်အတူပြန်လာသည်။ ဤအချိန်သည် Android မှတစ်ဆင့်ဓါတ်ပုံများကိုပို့သောအခါအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကြိုးစားသူများအားရည်ရွယ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအထောက်အကူပြုမယ့်အံ့သြဖွယ်ဖြေရှင်းနည်းကိုရှင်းပြတော့မယ် သူတို့ကိုလုံခြုံစွာပို့ရန် Android မှဓါတ်ပုံများကိုစာဝှက်ပါ Android အတွက် Telegram ကဲ့သို့ခွင့်ပြုသည့် email သို့မဟုတ် messaging application များမှတဆင့်။
Android အတွက်တရားဝင် application store ဖြစ်သော Google Play စတိုးမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မည့် Android အတွက်အခမဲ့အခမဲ့ application တစ်ခုအားတစ်ခုတည်းသောဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်မည်။ ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ သင်သိချင်ရင် သင်၏ Android အားလုံခြုံစိတ်ချရသောအပိုတစ်ခုပေးပါ အထူးသဖြင့် လူမှုမီဒီယာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှတဆင့်သင်ပို့သည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ငါသည်သင်တို့ကိုဤဆောင်းပါး၏အစအ ဦး ၌သင်တို့ကိုငါစွန့်ပစ်ထားသော embedded ဗီဒီယိုအသေးစိတ်အဖြစ်နှင့်သင်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသောကလစ်ကိုမလွဲရန်သင့်အားအကြံပေး «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ပါ။ ၎င်းကိုရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သောလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တိုက်ရိုက်သွားရန်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်လျှောက်လွှာ၊ သင်၏ဓာတ်ပုံများ၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုပို့ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ Android တွင်စာဝှက်ဖြင့်သိမ်းထားရန်ဖြစ်စေ၊ အမည်၏တုံ့ပြန်မှုကိုတုံ့ပြန်သည် လျှို့ဝှက်စာကို Elite, ငါသည်သင်တို့ကိုဒီပို့စ်ရဲ့အဆုံးမှာညာဘက်ကို download လုပ်ပါရန် link ကိုချန်ထား။
1 ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျ Elite ကဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ။
2 Secret Message Elite ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ဒါပေမယ့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျ Elite ကဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ။
အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်မှလျှို့ဝှက်ချက်စာသတင်း Elite ကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိစေနိုင်သည် ဓာတ်ပုံများနှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုထိုဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများအပလီကေးရှင်းကိုယ်တိုင်ကစာဝှက်နေ သ၍ စာဝှက်ပါ.
လုံခြုံစိတ်ချရသောစာဝှက်စနစ်ပုံစံတစ်မျိုး ၎င်း၏စာဝှက်ဖြည်ခြင်းကိုတူညီသော application အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သာသုံးနိုင်သည် ရုံက cencryption ကိုသော့ကိုသိ ဓာတ်ပုံတွေ (သို့) မက်ဆေ့ခ်ျတွေစာဝှက်တာကိုငါတို့သုံးခဲ့တယ်။
ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစာဝှက်ရန် (သို့) စာဝှက်ရန် application ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည် သော့ချက်နံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပါရွေးချယ်လိုသောနံပါတ်များ၊ လိုချင်သလောက်ဂဏန်းများနှင့်ဂဏန်းများပါသောနံပါတ်များသည်ယုတ္တိရှိပြီး၎င်း app မှတစ်ဆင့်စာဝှက်ထားသောဤမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများကိုစာဝှက်ဖြည်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သိရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂဏန်းသော့ကိုရွေးပြီးတာနဲ့၊ စာဝှက် (သို့) စာဝှက်ဖြည်ဖို့ (သို့) စာဝှက်ဖို့သာလိုလိမ့်မယ် စာဝှက်ဖို့ (သို့) စာဝှက်ဖြည်ဖို့ဓာတ်ပုံကိုရှာပြီးသက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်း!
အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်စာဝှက်ဖြင့်ရေးသားထားသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုအက်ပလီကေးရှင်း၊ စာဝှက်ထားသောစာတိုပေးပို့ချက်များသို့မဟုတ်စာဝှက်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဆက်သွားမည်ဆိုပါကအခြားသူသို့မဟုတ်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုပေးပို့ရန်သွားမည်ဆိုပါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး၊ သင့်အန်းဒရွိုက်တွင် application ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားပါကသင်လည်းလိုအပ်သည် ယခင်ကအတူတူပင်၏ encryption ကိုများအတွက်အသုံးပြုသောဂဏန်းသော့ကိုငါသိ၏.
သင်နှင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်ကိုအရီရီရီကရှင်းပြသော်လည်းအမှန်တရားသည်၎င်းသည်ပုံရသည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြု။ အပေါ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ချက်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုစာဝှက်ခြင်းနှင့်စာဝှက်ဖြည်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ငါပြသသောလျှောက်လွှာ၏လက်တွေ့လမ်းညွှန်။
Secret Message Elite ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android မှဓါတ်ပုံများကိုမည်သို့လုံခြုံစွာပို့နိုင်မည်နည်း။
Carlos ruiz ဟုသူကပြောသည်
encrypt မပြောခြင်းနှင့် encrypt လုပ်ရန် 'word' ကိုပိုနှစ်သက်ခြင်းတို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Carlos Ruiz ကိုပြန်သွားပါ
Nomu S20, စပိန်ဘာသာဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း